Yoel 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Yehowa asɛm a ɛbaa+ Petuel ba Yoel nkyɛn ni: 2 “Mpanyimfo, muntie eyi, na asase sofo nyinaa, monyɛ asõ.+ So saa ade yi bi asi pɛn wɔ mo bere so anaa mo agyanom bere so?+ 3 Monka ho asɛm nkyerɛ mo mma, na mo mma nka nkyerɛ wɔn mma, na wɔn mma nso nka nkyerɛ awo ntoatoaso a edi hɔ.+ 4 Nea ɔsã di ma ɛkae no, mmoadabi adi;+ nea mmoadabi di kae no, hwidɔm adi; nea hwidɔm di kae no, ntɛfrɛw adi.+ 5 “Asabofo,+ munnyan na munsu, na asanomfo nyinaa, nsã dɔkɔdɔkɔ+ nti, muntwa adwo,+ efisɛ asã wɔ mo anom.+ 6 Na ɔman bi aba m’asase so; ɛyɛ den, na emu nnipa nni ano.+ Wɔn sẽ te sɛ gyata sẽ,+ na wɔwɔ gyata abogye. 7 Wɔama me bobe ayɛ ahodwiriwde,+ na me borɔdɔma ayɛ dunsin.+ Wɔapempan ho ma ayɛ kwaterekwa, na wɔatow agu.+ Ne mmaa ayɛ fitafita. 8 Twa adwo sɛnea ɔbaabun fura atweaatam+ yɛ wɔ ne mmabaabere mu kunu ho no. 9 “Wɔatwa aduan afɔre+ ne afɔrebɔ nsã+ afi Yehowa fie; asɔfo, Yehowa asomfo+ no, di awerɛhow.+ 10 Wɔasɛe afuw mu nneɛma,+ asase no redi awerɛhow;+ wɔafow nnɔbae no, nsã foforo ayow,+ ngo ase atu.+ 11 Akuafo ani awu;+ awi ne atoko nti bobe nturo mu adwumayɛfo twa adwo, efisɛ afuw mu nnɔbae asɛe.+ 12 Bobe aguan, na borɔdɔma nso akisa. Granate akutu ne abɛ ne aprɛ dua, ne wuram nnua nyinaa awuwu;+ ahurusi de aniwu atu afi adesamma mu.+ 13 “Asɔfo, mommɔ abɔso na mommɔ abubuw.+ Afɔremuka asomfo,+ muntwa adwo. Me Nyankopɔn asomfo, mommra mmɛda atweaatam mu anadwo, efisɛ wɔde aduan afɔre+ ne afɔrebɔ nsã akame mo Nyankopɔn fie.+ 14 Monhyɛ bere mma mmuada+ kronkron. Monyɛ afahyɛ nhyiam titiriw.+ Mommoaboa mpanyimfo no ne asase no sofo nyinaa ano mmra Yehowa mo Nyankopɔn fie,+ na munsu mfrɛ Yehowa na ɔmmoa mo.+ 15 “Ao, ɛda no;+ Yehowa da no abɛn,+ na ɛbɛba sɛ ɔsɛe a efi ade nyinaa so Tumfoɔ no nkyɛn! 16 So wontwaa aduan mfii hɔ yɛn anim, na wontwaa anigye ne ahurusi mfii yɛn Nyankopɔn fie?+ 17 Borɔdɔma a aguan no awuwu wɔn nnade ase. Asan nso, wɔama ada mpan. Wɔadwiriw adekora adan agu, efisɛ nnɔbae asã. 18 O hwɛ sɛnea afieboa si apini! Hwɛ sɛnea anantwikuw nenam basabasa! Wonnya adidibea.+ Na wɔde asodi ato nguankuw no so. 19 “O Yehowa, wo na misu frɛ wo,+ efisɛ ogya ahyew sare so adidibea, na ogyaframa ahyew wuram nnua nyinaa.+ 20 Wuram mmoa nso ani agyina wo,+ efisɛ nsubon no ayoyow,+ na ogya ahyew sare so adidibea.”